Gqoka amasethi amaningi e-Hanfu mahhala + eduze kwaseJiefangbei + eduze kwaseHongyadong + eduze kwezitebhisi eziyishumi nesishiyagalombili + isitayela esisha sesiShayina sokuphakama + iprojektha + ilineni lomshini + eduze kwesitimela esincane
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-孟浪
Le ndlu itholakala e-Datongfang City B&B eduze kwase-Jiefangbei. Inamagumbi okulala amabili negumbi lokuhlala elilodwa elinesakhiwo esiyi-duplex sesitayela sase-Japan esikwazi ukuhlalisa abantu abangu-6. Iseduze ne-Hongyadong Scenic Area futhi ihambela phansi. kanye Jiefangbei Pedestrian Street imizuzu embalwa. ungakwazi ukufinyelela Hongya Umgede, lapho punches internet udumo e.
Kukhona amakhethini e-Japan bamboo, izimbali ze-cherry, i-izakayas, ama-tatami mats, izibani zaseJapane, amafeni, izambulela zephepha nezinye izinto ezincane endlini yonke.Wonke amakhona endlu afanele ukuthwebula izithombe. Sinikeza ama-kimono endlini yethu ukuze sithwebule abafowethu nodadewethu abancane, futhi asiyikhokhisi irenti yezimpahla zokugqoka.
Kunezitezi ezimbili ekamelweni, phansi ngayinye ifakwe yokugezela ezimele, igumbi ifakwe 3 1 imitha 8 imibhede emikhulu, engakwazi ukuhlalisa 6 abantu. Igumbi lokuphumula i-tatami mat enkulu, engasetshenziswa njengendawo yokuzijabulisa ukuze uphuze itiye futhi ubuke amafilimu.
Nikeza ngeziqandisi, ama-TV, ama-projektha, imishini ye-mahjong, ezomisa izinwele ezinamandla amakhulu nezinye izinto zokusebenza. Izingubo zokulala zikhululekile futhi zenziwe ngendlela efanayo, ngakho ungalala kahle. Amathawula namathawula okugeza enziwe ngekotini elimsulwa, futhi afakwe izixubho namakama alahlwayo. Ngaphezu kwalokho, izidingo zansuku zonke ezifana nezicubu, ijeli yokugeza, i-shampoo, njll. nazo zizolungiselelwa ngokugcwele.
4.95(19 okushiwo abanye)
4.95 · 19 okushiwo abanye
Shona phansi uhambo lwemizuzu emithathu ukuya eJiefangbei, imizuzu eyishumi ukuya e-Hongyadong, eduze ne-Linjiangmen Light Rail Station, kanye ne-Bayi Snack Street, Deyi Food Street, Yangtze River Cableway, Raffles City, Chaotianmen Wharf.
Ngemva kokubhukha, kuzoba nesevisi yekhasimende ekhethekile yakho yomuntu siqu noyedwa. Igumbi likhiywe ngekhodi futhi ungakwazi ukungena wedwa.
U孟浪 Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Chongqing namaphethelo